Wareegii 3aad Ee Maalinta Xasuuqii UBBO Oo Jigjiga Iyo Gobolada Deegaanka Ka Qabsoomay Maanta. - Cakaara News
Wareegii 3aad Ee Maalinta Xasuuqii UBBO Oo Jigjiga Iyo Gobolada Deegaanka Ka Qabsoomay Maanta.
Jigjiga(CN) Jimce.14.Nov.2014, Shacabka Deeaanka Soomaalida Itoobiya ayaa soo maray marxalado kala duwan oo ay nabadgalyo darradu ugu horaysay taas oo shidaalkeedu ahaa ururka nabadiidka ah ee UBBO. Dhibaatooyinka ay budhcada UBBO gaadhsiisay shacabka ayaan halkan lagu soo koobi karin balse waxaa lama ilaawaan ah xasuuqii iyo dilkii ay dhiiga shacabka ku caadaysatay wakhtigii ay awooda lahayd UBBO.
Waxaa maanta si wayn looga xusay xarunta DDSI ee magaalada Jigjiga maalinta xasuuqii UBBO ee shacabka DDSI taasoo laqabto shanta bisha Hidhaar ee tirsiga dalka. Sidoo kale waxaa munaasibadan maanta laga qabtay gobolada deegaanka iyo qaybaha kale ee DDSI.
Hadaba xuska maalintan oo ay shacabka deegaanku ku xasuustaan dhibkii iyo xasuuqii UBBO ee shacabka ayaa maanta waxay kadhacday madasha shirwayanaha ee SMCX. Waxaana kasoo qaybgalay masuuliyiinta sare ee DDSI oo ay ugu horeeyaan Labada Madaxwayne kuxigeen ee DDSI Mudane Mowliid Haayir iyo Marwo Sucaad Axmed, Madaxa Xarunta dhexe ee XDSHSI mudane Cabdicasiis Maxamed Cabdi, golaha wasiirada iyo qaybaha kala duwan ee dadwaynaha.
Waxaana maalintan tiiraanyada iyo dib u melicsiga dhibaatooyinka ay ubbo u gaysatay shacabka deegaanka ugu horayntii ka hadlay madaxwayne ku xigeenka ahna wasiirka waxbarashada DDSI mudane Mawliid Haayir Xassan, isaga oo ugu horayntii tacsi u diray eheladii shacabka deegaanka ee naftooda ku waaway xasuuqii arxandarnada ahaa ee ay shacabka deegaanka u gaysatay hadhaagii UBBO.
Sidoo kale waxa uu tacsi u diray ciidamada geesiyada liyuu booliska kuwii naftooda ku waaway dabar goyntii iyo tir tiridii budhcadii UBBO.
Dhibaatada UBBO waxay dhaxal siisay shacabka deegaanka dib-u-dhaca, jahawareerka iyo dilka kasakow waxaa maanta jira boqolaal caruur ah oo ay aabo iyo hooyaba tireen (ardayda ku xaraysan dugsiyada hoyga agoonta), kuwo ay laxaadkii ka qaadeen iyo kuwo ay kufsadeenba. Hasa ahaatee waxaa dhibaatadaas iyo ilmadii shacabka kadhashay hogaamin wadani ah iyo dhalinyaro ka dhiidhiday oo naftoodii iyo maalkoodiiba u huray in ay ka tirtiraan cadawga dhiig miiratada ah ee dhiiga shacabka ka ganacsada islamarkaana ka xun horumarka deegaanka.
Shacabka deegaanka oo maanta kunaaloonaya isbadal horumar oo dhinac walba ah ayaa maalintan ku xasuusta xasuuqii iyo dhibaatooyinkii ay UBBO ku naf goysay kumanaanan shacab ah islamarkaana shacab badan waxyeelo badan gaadhsiisay.